မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ယဉ်ယဉ်လေးသာရူးလို့ နေ
အမှတ်တမဲ့ တွေ့မိရာမှလျှပ်ပြက်သလို အဖြစ်အပျက်တွေကငါ့ ရဲ့ အပြစ်မဲ့ ကမ္ဘာလေးကို အမှောင်ချသွားသတဲ့ …ပြောမထွက်သင့်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အန်ချခဲ့ တဲ့အသုံးမကျတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တခုနဲ့ခါးသီးတဲ့ မင်းရဲ့ စကားသံတွေကို နားမထောင်တော့ တာတောင်ပဲ့ တင်ထပ်ကြားစေတဲ့ နားတစုံရယ်မင်းရဲ့ ပါးပြင်ထက်က ဖမ်းစားမှုထောင်ချောက်မှန်းမသိအပြုံးတုတခုနဲ့ ပါးချိုင့် လေးကိုမှ တပ်မက်မိတဲ့ မျက်လုံးတစုံရယ်ကြောင့်….စဉ်းစားဥာဏ်မဲ့ မီးသင့် ဦးနှောက်ငယ်နဲ့ခံစားမှုကင်းနှလုံးသားကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအဖြစ်အကြွင်းမဲ့ အချိန်ကာလတခုအထိဖန်တီးမျှော်လင့်ချက်မဲ့ လမ်းမထက်က ဒီခရီးငါ မငြီးပဲ ဆက်လှမ်းနေရင်းမာယာကင်းတဲ့ အချစ်စစ်တခုတလေများမတွေ့ နိုင်မှန်းသိ ရှာဖွေကြည့်မိယဉ်ယဉ်လေးသာ ရူးလို့ နေ၏….
kabyar lay ka chit sa yar layy :)
မောင်ကိုတိုး တစ်ယောက်တည်း ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတာများမှတ်ရ .. သူလည်းယဉ်ယဉ်လေးရူးတတ်သားပဲ .. :P
Style ကတော့ မိုက်တယ် .. မြင်းကြီးပေါ်ခွစီးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ .. ပခန်းကိုကြီးကျော်ရဲ့ စတိုင်ကို သဘောကျလို့လား .. ? .. :P :P :P
ပခန်းကိုကြီးကျော်မြင်းကြီးစီးတဲ့ style တော့ မသိဘူးအရက်သောက်ပြီး ကြက်ကြော်နဲ့ စားတဲ့ ပုံစံတော့ ကြိုက်သားပဲ ဟဲဟဲ :P
မယ်လိုဒီ.. ကိုတိုးပြောသလို.. သူနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးရူးဖို့ အဖော်တယောက် တိုးလာပြီနော် အဟဲ ။ ဒီကဗျာလေး ကြိုက်တယ် မယ်လိုဒီရေ ။